अक्टोवर क्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवाद वारे एक छलफल –स्वनाम साथी
अक्टोवर क्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवाद विषयक अन्र्तक्रियात्मक विचार श्रृंखलामा प्रस्तोता र सक्रिय सहभागीका रुपमा उपस्थित हुनुभएका तपाई सबै प्रिय, आत्मिय, उज्यालोको, समाजवादको, साम्यवादको यात्राका लागि अग्रसर हुन इच्छुक कमरेडहरुमा अनेक अनेक अभिवादन छ । लाल सलाम छ । हामी नेपाली धर्तीमा नेपाली जनताको महान वलिदान, त्याग, तपस्या सहित संचलित जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भमा पनि उभिएका छौं । नेपाल र संसारभर मानव मुक्तिको लागि, वर्गविहिन समाज, कम्युनिस्ट समाजतिरको यात्रा तय गर्नका खातिर भएका तमाम संघ्रर्ष र त्यसमा जीवन बलिदान गर्नुभएकाहरुप्रति उच्च सम्मान, लाल सलाम र स्मरण गर्न चाहन्छौं ।
हामी आजभन्दा १०० वर्ष अगाडि रुसमा भएको अक्टोवर क्रान्तिको सम्झनामा वर्ष दिने उत्सब मनाइरहेका छौं । यसै सिलसिलामा देशैभरि विविध कार्यक्रमहरु भइसकेका छन् । भइरहेका छन् । र, हु‘दैपनि छन् । कतिपय कार्यक्रमहरु यस अक्टोवर क्रान्ति शतवार्षिकी समारोह समितिको आयोजनामा भएका छन् भने कतिपय कार्यक्रमहरु अन्य विभिन्न संघसंस्थाहरुले आफैं पनि आयोजना गरेर सम्पन्न भएका छन्, हुने क्रममा छन् ।
यो आजको कार्यक्रम पनि अक्टोबर क्रान्ति शतवार्षिकी समितिले आयोजना गर्ने भनिएको श्रृंखलावद्ध कार्यक्रमहरु मध्य दोस्रो कार्यक्रम हो । आजको कार्यक्रमको विषय ‘अक्टोवर क्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवाद’ शिर्षकमा राखिएको छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन समेत विभिन्न घुम्तीहरु छिचोल्दै आज यहॉ आईपुगेको छ । विश्वव्यापी पू‘जीवादको नवउदारवादी कथित विकास र समृद्धिको नाममा इतिहासमा कहिले नभएको स्तरमा शोषण शासन र उत्पिडन मच्चिएको छ अनि यस ब्रह्मलुटको साम्राज्यमा केही मुट्ठीभर मानिसहरुको अधिपत्य खडा भएको छ । यसले विश्वभरीनै विश्वव्यापी पूँजीपति वर्ग राज्य व्यवसाय इत्यादी खडा भएको छ । यसका विकल्पमा सर्वहारा वर्गले आफ्नो तथा मानव जातीकै वर्गीय मुक्तीको लागि सर्वहारा वर्गीय राज्य व्यवस्था र संजालहरु खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । यहीबेला सबैभन्दा बढी श्रमजीवि, उत्पीडित, गरिखाने मानिसहरुले वर्गीय दुनियाँबाट निस्किएर साम्यवादी व्यवस्थातिरको महान यात्रामा सरिक हुने प्रेरणा र शिक्षा लिनका लागि बढी बुझ्न र वहस गर्न, जान्न, सोच्नुपर्ने, लाग्नुपर्ने र गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्न खोज सोध अनुसन्धान र जाँचवुझ गर्दै अघि बढ्नु पर्ने विषय नै महान अक्टोवर क्रान्ति र त्यसको आलोकमा वैज्ञानिक समाजवाद, संसदीय समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, वजार समाजवाद, उन्मुख समाजवाद नाम गरेका प्रणालीहरुको वारेमा फेरि अवलोकन गर्नको लागि योे कार्यक्रमको श्रृंखला आयोजना भइरहेको छ । र, तपाई हामी सबै अलि बढी अन्र्तक्रियात्मक र सहभागितामूलक कार्यक्रमका रुपमा सम्पन्न गर्न यहाँ उपस्थित भएका छौं । हिजोको हिँडाईको समीक्षा र आगामी मानव समाजको अग्रगामी यात्रामा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आर्थिक दृष्टिबाट कमरेड मुरारी अर्याल, सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टिबाट कमरेड रामराज रेग्मी, , राजनीतिक, दार्शनिक दृष्टिबाट कमरेड रमेश सुनुवारले स्वतन्त्र र प्राज्ञिक स्तरमा यहाँ अहिले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु नै हुनेछ भने त्यसपछि हामी उपस्थितहरुले छलफलमा आफ्ना विचारहरुलाई विना वन्देज खुलारुपमा राखेर आजको कार्यक्रमलाई सकेसम्म बढी लाभदायक र सिर्जनात्मक बनाउने नै छौं भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौं । यो सुनिरहनु भएको यो वाचन कुनै छुट्टै प्रस्तुति होइन । आजको कार्यक्रमको शुरुवात गर्नका लागि, छलफलका लागि ढोका खोल्ने सामान्य शिष्टाचार मात्रै हो । जिज्ञासा र छलफलका लागि अलिकति झकझकाहट र अनुरोध मात्रै हो । प्रश्न पनि हामीले नै गर्ने र उत्तर पनि हामीले नै खोज्ने हो । यो कार्यपत्र होइन ।
रुसको अक्टोवर क्रान्तिलाई सम्झदा र त्यसले संसारमा गरेको असरहरु बारे गम्भीरतापूर्वक हेर्दा मानव जातिको इतिहासमा अतुलनीय एवं वहुआयामिक प्रभाव पारेको पाइन्छ । मानिसको जीवनको सबै पहलुहरु–आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक इत्यादी क्षेत्रमा व्यापक गहिरो र उँचो नयाँ अभ्यास शुरु गरेको थियो र अझैं पनि त्यसले ल्याएको छाल बाँकी नै छ । कुनै न कुनै हिसावले मानव समाज अक्टोवर क्रान्तिद्धारा प्रभावित छ । वर्गीय समाजवाट वर्गविहीन समाजमा प्रवेश गर्ने कार्यक्रम अक्टोवर क्रान्तिको मूलभूत र सारभूत कुरा थियो । मानव जातिको इतिहासमा पेरिस कम्युनपछि यति ठूलो मात्रामा यति ठूलो प्रयोग यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । त्यो जारी छ । यसैको उज्यालोमा कुरा गर्दाखेरि अहिले हामी नेपालमा त्यसको सार्थकता के हुनसक्छ भनेर विचार, विमर्श पनि गर्दैछौं ।
रुसका जनताले पेट्रोगाड सहरमा सशस्त्र क्रन्तिमार्फत त्यहाँको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई च्यूत गरि सत्ता दखल गरेको कम्युनिस्ट क्रान्तिलाई अक्टोवर क्रान्तिका रुपमा लिने गरिएको हो । त्यतिबेला रुसमा चलेको जुलियन क्यालेण्डर अनुसार १९१७ को अक्टोवर २५ मा सम्पन्न उक्त क्रान्ति यतिबेलाको ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार नोवेम्वर ७ मा पर्छ । रुसका श्रमजीवि जनताले कम्युनिस्टहरुको नेतृत्वमा चलेको रसियाली सामाजिक प्रजातन्त्रिक श्रमिक पार्टी (वोल्सेविक) को अगुवाईमा अक्टोवर क्रान्ति सम्पन्न गरेका थिए । यो क्रान्तिले संसारमा सर्वहारावर्गको संक्रमनकालिन राज्यसत्ता स्थापना गर्ने अथक प्रयास गरेको थियो । कम्युनिस्ट लगायत क्रान्तिकारीहरुले १८७१ मा विद्रोह मार्फत केही समयको लागि फ्रान्सेली सहर पेरिसमा कम्युन स्थापना गरेका थिए त्यसपछी भएको अक्टोवर क्रान्ति भने संसारमा कतै भएको थिएन । अक्टोवर क्रान्तिको बाटो सर्वहारा वर्गीय क्रान्तिकारीहरुको बाटो हो । परम्परागत दमनकारी चरित्रको अन्त्य कम्युनिस्टहरुको उदेश्य हो । वर्गविहीन समाजको सुरुवातसंगै राज्यसत्ताको समेत विलय कम्युनिस्टहरुको उदेश्य हो । मान्छेले मान्छेलाई शोषण गर्ने परिपाटीकोे अन्त्यसंगसंगै सबैले आफ्नो क्षमताअनुरुप सामाजिक उत्पादनको उपभोग गर्नु कम्युनिस्टको अभिष्ट हो । साम्राज्यवाद तथा मानवद्वेषी विचारका संवाहकहरुले पश्चिमा संसारमा विकसित ५०० वर्षका पूँजीवादको अनुभवको आधारमा संसारलाई स्थायी रुपमा विभाजन गरि मनिस–मानिसवीच पर्खाल निमार्ण गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर त्यसलाई ध्वंस पार्दै रुसका कम्युनिस्टहरुले संसारको लागि रोटी र शान्ति, जनताको रोजगार, साम्राज्यवादीको लागि युद्ध र कम्युनिस्टका लागि क्रान्तिको नारा वुलन्द पारे । त्यसैको फलस्वरुप रुसी जनता युद्ध होइन क्रान्ति, जनता विरुद्ध होइन शोषण विरुद्ध हतियार भन्दै कम्युनिस्ट क्रान्तिलाई यूगान्तकारी विजयको रुपमा हेर्न सर्मपित भएका थिए । आजको संसार यसै युगान्तकारी कम्युनिस्ट क्रान्तिको समेत उपज हो । लैङ्गिक भेदभावबाट मुक्ति, श्रमिक अधिकार, वौद्धिक सम्पत्ति, संस्कृतिको श्रीवृद्धि, अर्थतन्त्र र प्रविधिमा देखा परेको अद्भुत विकास तथा अन्याय, अत्याचार र असमानताप्रतिको संगठित विद्रोहको चेत पनि यही क्रान्तिको उपज हो । आज संसारमा नै माक्र्सवाद तथा भौतिकीय द्धन्द्धात्मक दर्शनका राजनीतिक वाहकहरुको वर्चश्व पनि यही युगान्तकारी क्रान्तिको परिणाको रुपमा हाम्रो सामु रहेकै कारणले पनि हामीले अक्टोवर क्रान्तिलाई सम्झना गर्नु र त्यसको आलोकमा विकसित राजनीतिक परिघटनाहरुबारे वहस, छलफल, समीक्षा, जाँचवुझ, प्रश्नहरुमा लाग्नु सर्वथा उचितै छ।
उत्तरको महाचीनमा चिनिया विशेषता सहितको वजार समाजवाद, दक्षिणको महाभारतको संविधानमा उल्लिखित संसदीय समाजवाद र नेपालको संविधानमा भनिएको ‘उन्मुख समाजवाद’ पनि रुसको अक्टोवर क्रान्तिको प्रभाव अन्र्तगत नै आजको स्वरुपमा प्रकट भएको देखिन्छ । यस बाहेक प्रजातान्त्रिक समाजवाद तथा अन्य समाजवाद पनि चर्चामा छन् । आजको हाम्रो मुख्य विषय यिनै सन्दर्भहरुसित गाँसिएर वैज्ञानिक समाजवादबारे थप खोजी र छलफल गर्ने प्रयासलाई अघि बढाउनेमा केन्द्रित गरौं र आवश्यकता अनुसार थप छलफल तथा खोज गरौं ।
पहिले समाजवाद भनेको के हो? वैज्ञानकि भनेको के हो?भन्ने जिज्ञासा उचित होला भन्ने लागेको छ माक्र्स, एंगेल्सको दृष्टिमा–एंगेल्सले समाजवाद वैज्ञानिक या काल्पनिक भन्ने लेखमा वैज्ञानिक समाजवादबारे उल्लेख गर्नुभएको छ । समाजवाद वैज्ञानिक भन्ने सन्दर्भमा रबर्ट ओयन, सेन्ट साइमन, फुरिएहरुको असाध्यै प्रशंसा गर्दागर्दै पनि मजदुरहरुलाई काल्पनिक समाजवाद हैन वैज्ञानिक समाजवाद अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ । त्यतिबेला यूरोपका अराज्यवादीहरुले पनि साम्यवादी, समाजवादी व्यवस्थाको पक्षपोषण गरिरहेका थिए, कुनै पनि खालको राज्यसत्ताको वाकुनिन व्लांकीहरुले विरोध गर्नुहुन्थ्यो । तर माक्र्स एंगेल्सले साम्यवादी समाजको शुरुवातमा पुरानो राज्यसत्ता ध्वंसगरी सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वमा केही समय राज्य रहनुपर्छ भन्ने वकालत गर्नु भएको थियो । त्यहीबेला सर्वहारा वरर्गको ्अधिनायकत्व र वैज्ञानिक समाजवादको कुरा जोडतोडले उठेको हो ।
उहाँहरु साम्यवादी व्यवस्था, कम्युनको हिमायती हुनुहुन्थ्यो । मूल कुरा वर्गविहिन व्यवस्थाको शुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने थियो । सर्वहारा वर्गले नयाँ व्यवस्थाको रक्षार्थ नयाँ प्रकारको राज्य सत्ताको प्रयोग, प्रणालीको प्रयोग गर्ने जसलाई उहाँहरुले सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व भन्नुभयो । सामन्ती या पूँजीवादी राज्य व्यवस्था भन्दा भिन्न कुरा उठाउनुभएको थियो, जसलाई लेनिनले १९१७ को मार्चमा लेखिएको परदेशबाट पत्र (लेटर फ्रम अफार) मा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । वैज्ञानिक समाजवाद सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व अन्र्तगत काल्पनिक भन्दा भिन्न, अराज्यवादीहरुभन्दा पनि फरक तवरले चलाउने भन्ने सन्दर्भमा प्रयोग गर्नुभएको थियो ।
यहाँनेर प्रष्ट पर्नुपर्ने कुरा के छ भने समाजवाद कुनै अलग्गै चरण थिएन उहाँहरुको विचारमा । यो साम्यवादी व्यवस्था या कम्युनहरुको निमार्ण क्रमको प्रारम्भिक चरण मात्रै थियो, स्थायी व्यवस्था होइन । यस अर्थमा हामी समाजवादी होइनौं, कम्युनिस्ट हौं । हाम्रो व्यवस्था पनि कुनै समाजवादी व्यवस्था होइन, साम्यवाद, कम्युनको संसार बनाउने र त्यो अहिले र यहीँबाट शुरु गर्ने हो भन्ने नै थियो । साम्यवादको पाइला त हो, शुरुवात त हो तर गन्तव्य होइन बरु नयाँ जनवाद समेत साम्यवाद अन्र्तगतको पाइला हो ।
हरेक समाज, मानव समाज सबैखाले चरण÷युग÷व्यवस्थाबाट गुज्रन्छ नै या गुज्रनैपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन । पेरिस कम्युन पछि अहिले उपलब्ध ज्ञान, वुद्धि,प्रविधि, गरिमा र प्रतिभाले पूँजीवादी प्रक्रियाबाट अहिलेको समाज गुज्रनैपर्छ भन्ने छैन । हामी सिधै साम्यवादमा जान सक्छौं । साम्यवाद न त कुनै गनतव्य हो न त यात्रा मात्रै । यो त वर्गीय वन्धनहरुबाट मुक्तिको सवाल हो । साम्यवादको शुरुवात अहिले र यहीँ नै व्यक्तिगत, सामुहिक र सार्वजनिक तहमा सम्भव छ । सम्झौताको चरणमा समाजवाद, नयाँ जनवाद, वैज्ञानिक समाजवादमा प्रवेश गर्नुपर्ला त्यो वेग्लै कुरा हो ।
विज्ञान के लाई भन्ने ? वैज्ञानिक के लाई भन्ने ? कुनै कुरा वैज्ञानिक हुनलाई के के कुरा हुनु पर्छ ? साक्ष दसी प्रमाणले सावित नगरिकन कुनै पनि कुरा वैज्ञानिक ठहरदैन । प्रदत्त शर्तहरु भित्र बारम्बार उस्तै नतिजा आउने प्रकृया र परिणामलाई वैज्ञानिक भनिन्छ । जुन तथ्यहरुलाई गलत अथवा सही सावित गर्न सकिदैन त्यो विज्ञानमा पर्दैन । यो नियम समाजवाद साम्यवादमा पनि उत्तिकै लागु हुन्छ ।
त्यतिवेलाको रुसी समाजमा दासानुदास मजदुरहरु भुदासहरु र कृषकहरुको व्यापकतामा पहिलो महायुद्धले जर्जर,भुखमरी,हीम हुरी माझ अक्टोवर क्रान्ति सम्पन्न भयो । अक्टोवर क्रान्ति पछी लेनिनले सानो वालकलाई देखाउँदै वीस बर्षमा यो वालक साम्यवादी व्यवस्थामा जीउँछ भन्नु भएको थियो ।
उहाँले त्यसलाई व्याख्या गर्दै समाजको विकासका चरणहरुलाई व्याख्या पनि गर्नुभएको छ–इतिहासले के देखाउँदछ भने भिन्ना–भिन्नै बेलामा मानिसहरु भिन्ना भिन्नै विचार तथा इच्छाहरुबाट अभिप्रेरित रहेका थिए । त्यसको कारण के हो भने भिन्ना भिन्नै बेलामा मानिसहरु आफ्नो खाँचोको पूर्ति गर्न भिन्ना–भिन्नै ढंगबाट प्रकृतिसित लडेका थिए र तद्अनुसार, उनीहरुका आर्थिक सम्बन्धहरुले भिन्ना–भिन्नै रुपहरु लिएका थिए । कुनै बेला मानिसहरु प्रकृतिसित सामूहिक रुपले, आदिम साम्यवादका आधारमा लडेका थिए । त्यसताका उनीहरुको सम्पत्ति साम्यवादी सम्पत्ति थियो । यस्तो एक बेला आयो, जब मेरो र तेरो को भेदले उत्पादनको प्रक्रियामा प्रवेश ग¥यो । त्यसबेला सम्पत्तिले पनि निजि, व्यक्तिवादी चरित्र धारण ग¥यो र त्यसबेला मानिसहरुको चेतना निजि सप्पत्तिको भावबाट ओतप्रोत रहयो । अनि यस्तो समय, वर्तमान समय आयो, जब उत्पादनले फेरि सामाजिक चरित्र धारण गर्दैछ र त्यसैले सम्पत्तिले पनि चाँडै नै सामाजिक चरित्र धारण गर्नेछ र त्यही कारणले गर्दा मानिसहरुको चेतनामा विस्तारैसित समाजवादबाट अभिप्रेरित हुँदैछ ( स्टालिन, सर्वहारा समाजवाद) ।
राजनीति यो दुनियाँमा मुख्यत वर्गहरु उत्पन्न भएर राज्यको शुरुवात भएपछि निस्केको नयाँ धन्दा हो । आधुनिक मानवको अस्तित्व ३ लाख पचास हजार वर्षको रहेको छ । यो वर्गीय पार्टीगत राजनीति फ्रन्सेली राज्य क्रान्तिपछि भित्रिएको पेशा हो । हरेक वर्गहरुले आफ्नो हित रक्षार्थ पार्टीहरु खडा गर्ने गर्दछन् । वर्गीय दुनियाँमा सर्वहारा वर्गले आफ्नो वर्गको हित रक्षार्थ पार्टी उभ्याउने गरिएको हो । समाजवादी वा मजदुर वा कम्युनिस्ट पार्टी त्यसकै उपजको रुपमा अघि आएको हो । वर्गहरु नभएपछि, वर्गहरुको स्वार्थ रक्षा गर्ने वाध्यता रहन्न र राजनीति पनि रहन्न । वर्गविहीन वैज्ञानिक समाजतन्त्र वा साम्यतन्त्रमा राजनीति भन्ने पेशाको आवश्यकता रहन्न । वर्गहरु पनि रहन्न र पार्टीहरु पनि रहन्न । रहँदैन भन्दा पनि त्यसको आवश्यकता नै पर्दैन । पार्टी चाहिने जे कामका लागि हो, त्यो कामबाट निकै अगाडि पुगिसक्छ समाज र त्यहाँ पार्टीहरु अस्तित्वविहीन हुनेछन् । त्यहाँ राजनीति सून्दर विगतको स्मृति मात्र वन्छ ।
त्यस्तै साम्यवाद वा वैज्ञानिक समाजवादमा संस्कृतिहरु प्नि साँचो अर्थमा मानवीय संस्कृति बन्छ । सबै खालको वर्गीय संस्कार, व्यवहार, रितिरिजाव, चालचलनका चाडपर्वहरु जे जति आवश्यक हुन्छ ती सबै मानवीय चाडपर्व, संस्कृतिका रुपमा विकसित हुन्छन् । साम्यवाद निकट भविष्यको जरुरी रुप र गतिशील दिग्दर्शक विचार हो, परन्तु साम्यवाद श्रमकै मानव विकासको लक्ष्य, मानव समाजको रुप होईन । पूँजीवादी समाजमा अतीतले वर्तमानमा शासन गर्दछ । साम्यवादी समाजमा वर्तमानले अतीतमाथि शासन गर्दछ भनेर महान गुरु माक्र्सले यसको महत्वाबारे उचित ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभएकै छ हाम्रो ।
नेपालको सन्दर्भमा हिमाल, पहाड, तराई, पूर्व, मध्य, पश्चिमका नेपाली समाजका सन्दर्भमा वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो र त्यसले कसरी अनेकखाले विभेद, वहिष्करण, भेदभाव, जातभात, छोइछिटो, दमन, उत्पीडन, शोषण र शासनमा परेका समूदाय, वर्गलाई सम्वोधन गर्छ भनेर हामीले विमर्शहरु चलाउन र वुद्धिलाई सचेततापूर्वक सक्रिय गराउन जरुरी देखिन्छ । भूकम्पले आठ लाख वेसी घरहरु विनास भएको छ । वाढीले हजारौं मानिसहरुले ओत र उत्पादन गुमाएका छन् । समाजमा भेदभाव, वलत्कार, शोषण, अत्याचारको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । मधेसको मामिलामा, महिला, कथित दलितको मुसहर,चमार, डोम इत्यातिको मामिलामा वैज्ञानिक समाजवाद के हो ? जुम्ला हुम्लामा वैज्ञानिक समाजवाद कसरी हुने ?
मनुवादले, कथित व्राम्हणवादले, प्राचिन रुढी रितिरिवाजले ग्रस्त भएको समाजलाई कसरी सम्बोधन गर्छ वैज्ञानिक समाजवादले ? सामन्ती संस्कृति, पूँजीवादी या साम्राज्यवादी संस्कृतिले जसरी संक्रमित गरेको छ समाजलाई, त्यस विषयमा कसरी हल खोज्छ वैज्ञानिक समाजवादले ? खोलाको किनारमा जिन्दगी गुजारेका, मजदुरीमा विदेश लागेका लगभग ५० लाख श्रमिकहरुलाई वैज्ञानिक समाजवादले कसरी छुन्छ ? विदेशीएका यूवाहरुको, श्रमशक्तिको कारण गाउँघर उजाड र वाँझो हुन थालेको छ । खलवलिएको सामाजिक सन्तुलन आजको परिवेशमा, अवस्थामा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिका सारथीहरु को हुने हो या त्यो यात्राका हाम्रा यात्रीहरु को हुने हो ? श्रमको समेत विश्वव्यापीकरण भैरहेको अवस्थामा वर्ग संघ्रर्षका शक्तिहरु अन्यत्र तितरवितर हुन पुगेकोछ । यस बर्जुुवा सम्विधान निर्माणको वेला पांच महिनाको नाकाबन्दी लगायत अन्य हस्तक्षेप नेपाल मात्रैको वैज्ञानिक समाजवादी यात्रा दुश्कर हुने यथार्थ पनि छ ।
पूँजीवादलाई फालेर अघि बढ्ने सन्दर्भमा उ वेला कमरेड लेनिनले सम्भावना, शक्ति , साधन र समस्याहरुवारे गराउनुभएको सचेततालाई अलिकति ध्यान दिनु उचितै हुनेछ–पूँजीवादबाट साम्यवादमा संक्रमणले एउटा पूरै ऐतिहासिक युगको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो युग नसकिएसम्म शोषकहरु अनिवार्य रुपले पुर्नस्थापनाको आशा राखिराख्छन् र सो आशा पूरा गर्न उनीहरु पुर्नस्थापनाको प्रयत्नमा लाग्दछन् । सत्ताच्यूत शोषकहरुले आफू सत्ताच्यूत होला भनेर आशा गरेका थिएनन् । त्यसैले, जब उनीहरुको पहिलो गम्भीर पराजय हुन्छ, तब उनीहरु आफ्नो गुमेको “स्वर्ग”फर्काउनको लागि आफ्ना परिवारहरुको तर्फबाट दश दोब्बर शक्तिका साथ, सय दोब्बर भयानक जोश र घृणाका साथ लडाईमा उत्रन्छन् । पहिले रमाईलो र सजिलो जीवन विताईरहेका आफ्ना परिवारहरुलाई दुर्दशा, अभाव र “साधारण नरनारीहरु”को जस्तो श्रम–यातनाबाट जोगाउन उनीहरु सारा शक्ति लगाएर लड्छन् । निम्न–पूँजीपति वर्गका व्यापक समूहहरु पूँजीवादी शोषकहरुको पछि लाग्छन् । यी समूदायहरुको सम्बन्धमा सबैं मुलुकहरुको दशौं बर्षको ऐतिहासिक अनुभवले के सिद्ध गरेको छ भने उनीहरु ढुलमुल रहन्छन् र हिच्किचाउने गर्दछन्, एकदिन सर्वहारा वर्गको पछि लाग्दछन् भने अर्कोदिन क्रान्तिका अप्ठ्याराहरुदेखि डराउँदछन्, उनीहरु मजदूरहरुको पहिलो पराजय वा अर्धपराजय देखेर भयभीत हुन्छन, होस गुमाउँदछन, विना उद्देष्यले यताउता भाग्न थाल्छन् र एक शिविरबाट अर्को शिविरमा जान्छन्– लेनिन संकलित रचनाहरु, भाग ३५, पृ. ३५५
के हामीले यस विषयमा विना आग्रह खोजी, छानविन, जाँचबुझ, वहसहरु अघि बढाउन अव ढिला हुन लागिसकेको छैन र ?
अहिले विश्वव्यापीकरणको चर्को रापले नेपाली समाजपनि डामिएको छ । औधोगिकरणको चरमका कारण चीन र भारतको हावा पानी जमिन विशाक्त भैसकेको छ । हावापानीमा मिसिएर असी हजार भन्दा वढी टक्सिकहरु आउँछन् र मानव स्वास्थ्यमाथि सिधै हमला बोल्छन् । यसको हल कसरी गर्छ वैज्ञानिक समाजवादले आजको सन्दर्भमा ?
कम्युनिस्ट भनेको के हो ? सामन्ती, पूँजीवादी, सर्वहारावादी र साम्यवादी भनेको के हो ? त्यसका भेदहरु के के हुन् ? तिनलाई चिन्ने, जान्ने कसरी हो ? को कसरी सामन्ती हुने, के के हुँदा सामन्ती र के के हुँदा पूँजीवादी या सर्वहारा या के के नहुँदा सामन्ती, पूँजीवादी या सर्वहारा वा कम्युनिस्ट हुने या नहुने हो ? कसैले कम्युनिस्ट नाम राखेर पार्टी चलाउंदैमा र त्यो पार्टीको सदस्यता लिएकै भरमा कम्युनिस्ट भईन्छ ? त्यसका आधारहरु, नयूनतम गुणहरुहरुबारे सचेत हुन अभ्यास गर्न र जनतामा चेतना अघि बढाउन कसरी अघि बढ्नुपर्ने हो ? के वर्गीय दुनियांमा निवर्गीय मानिस हुन सकिन्छ के कम्युनिष्टहरुको पार्टी हुन्छ ? के हामी आफैैले आफैसंग सोधखोज र घोत्लिन र संगै बसेर मन मिल्ने पराना मित्र झैं मित्रालाप गरी उतर खोज्न सक्छौं ?
राजनीतिको पनि, कुन राजनीतिको कुरा गर्ने हो ? कम्युनिस्टको राजनीति हुन्छ कि हुँदैन ? वैज्ञानिक समाजवादमा राजनीति हुन्छ कि हुँदैन ? या कस्तो राजनीति हुने हो ? कम्युनिस्टले पार्टी बनाउने कि नबनाउने ? माक्र्सले त कम्युनिस्टहरुलाई अलग कम्युनिस्ट पार्टी नबनाउन र मजदुरहरुको पार्टीमा प्रवेश गर्ने काम गर्ने भन्नुभएको छ । लेलिनले अप्रिल थेसिस भन्ने लेखमा अन्य समाजवादीहरुभन्दा पृथक हुन वोल्सेभिक पार्टीको सामाजिक जनतन्त्रवादी नामको सट्टामा कम्युनिष्ट नाम राख्ने प्रस्ताव गर्नु भयो र संसारभरीका मजदुर पार्टीहरुले आफ्नो नाम कम्युनिष्ट राख्न थालेका हुन् ।
डेलिगेट्सहरु वा प्रतिनिधिहरुको समिती लाई सोभियत भन्ने हो । प्रतिनिधित्वपूर्ण समाजवादकै विषयमा पनि कसैले कसैको प्रतिनिधित्व कति, कसरी गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा पनि हामीले विमर्श चलाउन जरुरी छ । तपाईको वारेश हुन सक्ला तर प्रतिनिधि कति होला वैज्ञानिक समाजवादमा प्रतिनिधि लोकतन्त्र कति
हामीले हाम्रो लागि हाम्रो मामला हामी आफैंले हल गर्ने भन्ने कुरा हो हामीले सरल तरिकाले बुझ्ने कम्युन ।
आफुलाई कम्युनिस्ट भन्ने तर कम्युनिज्मवारे कहिल्यै विषद छलफल गर्न नचाहने भयो हामीकहाँ । धर्मशास्त्र जस्तो, आफुलाई सजिलो लागेको, आफुलाई फाइदा भए बाँकीलाई त के भनेजस्तो गरि हाम्रो आन्दोलन अघि बढ्यो, बढाइयो । प्रश्नलाई निषेध गर्ने, वहसलाई आरोपित गर्ने, अध्ययन, छलफललाई विग्रने यात्राको रुपमा प्रचार गरेर नोकरशाही एकमना मात्रै हैन पुच्छर समूह बनाउन हाम्रो आन्दोलनको सबैभन्दा बढी तागत खर्च गरियो । चाहिएको हामीलाई प्रश्न गर्ने, अध्ययन गर्ने, चिन्तन, वहस, छलफल गर्ने विशाल पंक्तिको थियो, हो तर हामी त्यसबाट भाग्यौं या रुची राखेनौं र नै नेपाली कम्युनिस्ट अन्दोलन आजको अवस्थाबाट गुज्रन वाध्य भैरहेको छ । नेता मात्र होइन कमरेड चाहिएको हो
आजको समय सबैभन्दा वढी ग्रसित छ साम्राज्यवादी, पूँजीवादी हुँकारबाट, जो कुलषित र त्याज्य हुँकार सिवाय केही होइन । संसारभर क्रान्तिकारी आन्दोलन, समाजवाद, साम्यवादविरुद्धको धावा तेज बनाएको छ पूँजीवादले । अक्टोवर क्रान्तिको सन्दर्भ, वर्गीय दुनियाँ मेटाउने र निवर्गीय दुनियाँ विकास गर्ने कुरा सबैभन्दा चाहिएको नै अहिले नै हो । शत्रु जागेको बेला,उसको ढलिमलिले गरिखानेहरुमाथि शोषण बढाएको बेला नै हो सबैभन्दा बढी आवश्यकता अक्टोवर क्रान्ति, वैज्ञानिक समाजवाद। साम्यवाद, कम्युनिज्मको ।
साम्यवादको यात्राबारे व्याख्या गर्दै कमरेड माओले विस्तारमा भन्नुभएको पनि छ–साम्यवाद सर्वहारावादी विचारधाराको पूर्ण व्यवस्था हुनुका साथै नौलो सामाजिक व्यवस्था पनि हो । यो कुनै पनि अरु विचारधारात्मक र सामाजिक व्यवस्था भन्दा वेग्लै छ, र यो मानव इतिहासमा सबभन्दा पूर्ण, प्रगतिशिल, क्रान्तिकारी र युक्तिसंगत व्यवस्था हो । सामन्तवादको विचारधारात्मक र सामाजिक व्यवस्था त अब इतिहासको अजायव घरमा मात्र रहेको छ । पूँजीवादको विचारधारात्मक र सामाजिक व्यवस्था पनि संसारको एक भागमा (सोभियत संघमा) अजायब घरको एक चिज भईसकेको छ, र अरु देशहरुमा यो “छिटो छिटो डुब्दै गईरहेको मरणशील मान्छे, पश्चिममा पहाडतिर अस्ताउन लागेको सूर्य झैं” छ, र यसलाई छिट्टै, अजायब घरमा लगेर राखिने छ । साम्यवादको विचारधारात्मक र सामाजिक व्यवस्था मात्रै आज सुन्दर जवानीले भरिभराउ छ र यो पहाड पन्छाउने र समुन्द्र पल्टाउने गति र वज्रको शक्ति लिएर संसारमा फिँजिदै छ ।”–माओ, नौलो जनवादका विषयमा(जनवरी, १९४०)
जे समृद्धिको कुरा छ हामीकहाँको संविधानवाला संसदीय उन्मुख समाजवाद या हामीले उठाइरहेको वैज्ञानिक समाजवादमा के हुने हो ? केलाई समृद्धि भन्ने ? कतिलाई ? समृद्धि त हुन्छ नै तर कतिलाई, कसलाई कति ? दश प्रतिशत मानिसलाई, नाइकेहरुलाई, अगुवाहरुलाई, ब्रोकरहरुलाई त छेलेखेलो नै पुग्ला समृद्धि । बाँकीलाई त जुन हैसियतमा साहुहरु त्यो स्तरको समृद्धि त कहाँको स्रोत, सधनले पुग्छ र मिल्ने समृद्धि ? मानव समाजको यत्नमा, यो धर्तीमा जति स्रोत र साधनहरु छन् त्यसले कतिलाई कति दिनलाई कतिसम्म पुग्छ समृद्धि भनेर हामीले हिसाब किताब गरेका छौं ?
हामीसँग क्षमता नभएको हैन । हामी अहिले पनि एक अरव गाडीहरु बनाउन सक्छौं बर्षमा विश्वभर जम्मा भएको प्रविधिको योगमा । तर त्यसलाई गुडाउने ठाउँ, बनाउने पदार्थ, चलाउने तेल, विजुली, उर्जा कति पुग्छ हिसाब गरौं । जहॉ औधोगिक कृषि गरिएको छ, त्यहाँ साठी बालीभन्दा बढी खेति नै हुँदैन भनेर त आइ नै सकेको छ । एउटा विषदीले काम नगरेपछि त्यो भन्दा कडा किसिमको र त्यसलाइृ विस्थापन गर्न थप कडा गरि असी हजार भन्दा बढी विषादीहरु त् आज उपयोग नै भएको छ । हामीकहाँ नै दूधदेखि पानीसम्म, तरकारी, साग, गोलभेंडा, फलफूल कति खान हुने, कति खान नहुने विषादी प्रयोग गरेर मानव स्वास्थ्यमा कति हमला भैरहेको छ आज हामीले हिसाब गरेका छौं ? आज हामी प्राणवायू हैन विषवायू, खाद्यान्न हैन विषादी खाइरहेछौं । यस्तै विकास हो हामीले खोजेको ? किन चाहिएको हो हमीलाई यस्तो विकास ? यस्तो समृद्धि ? हैन भने कसरी हैन र आजको समस्याबाट जसरी मानव समाज प्रताडित भैरहेको छ, त्यसबाट निकाल्ने हाम्रो प्रविधको विकास के कसो हो ? प्रवृधिबाट आउछ भनेको समाजवादले यसलाई सम्बोधन गर्ने कसरी हो ? हाम्रो जस्तो दरिद्रता, अविज्ञान र अविकासले ग्रस्त समाजमा हामी भनिदिन त सकौंला प्रवृधिले सबैथोक गर्छ भनेर तर त्यो सबैथोक गरिदिने प्रविधि धान्ने पृथ्वीको स्रोतको आयू, जमिनको उव्जाउपन कति हो भनेर सँगै हिसाब पनि खोज्ने कि ? देखाउने कि ?
वैज्ञानिक समाजवादमा कस्तो हुने हामीले स्रोतमा आधारित, आवश्यकतामा आधारित, वर्तुल,स्थानिय अर्थतन्त्र भउको
विकास, समृद्धिको बाटो समाउने हो । घाँटी हेर्ने र हाडको साइज अड्कल्ने हो । अहिलेसम्म कम्युनिस्टहरुले पनि आवश्यकता भनेर खानपिन, घर, गाडी, खेलौनालाई चिजवीजको छेलोखेला्े बुझ्यो । छिटै नौ अरव नाघ्ने विश्व जनसंख्यालाई सामानको फालाफल गर्न नहुने भएको तथ्य आएकै छ । यदि सिंगो मानव समाजले जुन ढांचाकांचामा साहु जीवन शैली चलेको छ त्यस्तो ढाँचामा जीउनको लागि साढेचार वटा थप धरतीले पनि धान्दैन भनी विज्ञहरु भन्दछन् त्यसैले जीवन शैलीमा आमूल परिवर्तनको वारेमा गम्भिर चिन्तन मनन गर्न, विश्वव्यापी कम्यूनहरुको जिन्दगी जीउन हामी वाध्य भएका छैनौं र ? पूँजीवादी जीवन शैलीको इन्कार र कम्यूनिष्ट जीवन शैलीको स्वीकार आजको अनिवार्य आवश्यकता बन्दै गएको देखिन्छ । अवश्यकता र चाहनाको झिनो भिन्नतालाई छुट्याउन सकिएन भने जटिलताहरु थपिन्छ नै । सुचना र सेवा धेरै सामान थोरै भोग गर्ने पर्याप्तता पहुँचको समाज कम्यूनको समाज नै वैज्ञानिक समाजवाद हुन सक्छ । स्मरण योग्य के छ भने त्यो आधारभूत आवश्यकता मिलेको रुस किन भत्कियो ? रोटीले मात्र त नपुग्ने रहेछ । विचार, भावना पनि चाहिने रहेछ ।
भोगवादी कि भौतिकवादी भन्ने त छुट्याउनै पर्छ । अहिले पनि हामीले पृथ्वीभरीका मानिसका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौं । सबै चाहनाहरुको पूर्ती मायावी यथार्थ(भर्चुअल, मिश्रित र अगमेन्टेड रियालिटी) वाहेक चिजविजहरुले कहिल्यै पूरा गर्न सकिन्न । सबैलाई साहुको सरहको जिन्दगी मिलाउने कुरा कति सम्भव छ, सोचौं । छेलोखेलो गर्न नसकिने हैन नमिल्ने भयो आजै हामीले आधा पृथ्वी उपभोग गरिरहेका छौं, अव आधा बाँकी छ । यसका स्रोतले कतिलाई पुग्छ विचार गरौं । व्यक्तिगत, सामुहिक, सार्वजनिक सम्पत्ति राखेर नीजि सम्पत्तिको मानसिकता विरुद्ध हामी उभिनैपर्छ । हामी भोगी भए पनि भोगवादी भने होइनौ ।
मेसिनले के काम गर्छ , के गर्दैन ? म्ष्चतथ, म्बलनभचयगक बलम म्षाष्अगति ९घम्० साथै दोहोरिरहने, मोनोटोनस र गह्रौं एवं मानव स्वास्थलाई अस्वस्थ गराउने सबै कामहरु यन्त्र मानव ( रोवट), स्वचालन(अटोमेशन), कृतिम वुद्धी(आर्टीफिसीयल इन्टेलिजेन्स), न्यानो टेक्नोलोजी, घम् प्रिन्टीङ्ग( एडिटिभ टेक्नोलोजी), व्लकचेन र ह्यास ग्राफ, ड्रोन डेलिभरी आदी मेसिनले गर्ने वातावरण शुरु भैसकेको छ । यी सबै प्रविधिहरु मानवका सहायक मात्र हुन् अंगका विस्तार मात्र हुन् तर चार घण्टा त मान्छेले काम गर्नैपर्छ । अन्तरिक्षमा गएका मानिसले सबैथोक पुग्दा पनि दैनिक चार घण्टा व्यायाम गर्छ अन्यथा शरीर कुजिन्छ भनेर । मानवजाती ढुंगे युग(सिलिकन) र दाउरा तथा फोसिल फ्युलको अन्तिमतिर आइपुगेको छ र यसले क्वान्टम, अप्टिकल र वायो कमप्यूटरहरुको, वायो टेक्नोलोजी,वैकल्पिक ऊर्जाको युगमा प्रवेश गरेको छ । यी सबै कुराहरु प्रविधि र मेसिनले गरिदिन्छ र त्यसैकारण मानिसमाथिको शोषण शासन उत्पिडनको सवालको हल गर्छ की गर्दैन गम्भिर छलफलको जरुरी छ । नैतिकता र आचार सम्बन्धि गम्भिर समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । वस्तु र चीजवीजको तृष्णा पूरा गरेर साम्यवादी समाज या वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कतै इनारमा पानी तान्नका लागि चुहिने बाल्टीको प्रयोगजस्तो मात्रै त होइन भनेर हामी कसरी विश्वस्त हुने ? उक्त वैज्ञानिक समाजवाद वा साम्यवादी समाजमा भोगवादको अनियन्त्रित तृष्णा समन गर्न भाैितकीय द्धन्द्धात्मक कम्युनिष्ट ध्यान योग के सहयोगी हुन सक्छ ?
थाहा चाहियो ।
तर हामीले गरि आएको अभ्यासले आन्दोलनमै पनि नयाँ समस्याहरु, उल्झनहरु र गतिरोधको खतराहरु पैदा गरेको छ । विद्धान त त्यो हो जसले अरुको गल्तीबाट सिक्छ । मूर्ख र मूढले मात्र आफ्नै गल्तीबाट पनि सिक्दैन । यो लोकतन्त्र, पूँजीवाद मानव समाजमा चलेको पाँच सय वर्ष भयो । यूरोपेलीहरुले शुरु गरेको यो व्यवस्थाको म्याद गुज्रिसकेको छ । नेपालले त्यही पूँजीवादलाई, त्यसको मूल स्वरुपलाई कायम राख्ने भनेको वज्रस्वाँठ मन हुनु हो । समस्याहरु छन् भनेर समाजको गतिलाई रोकेर राख्न मिल्दैन । समस्या छ भने विकल्प पनि छ । विकल्पको यात्रा अफ्ठेरो छ भनेर पछाडीतिरको यात्रा मानव चेतना विरुद्धको यात्रा मात्रै हुनेछ । अफ्ठोरो भएपनि यात्रा शुरु गरौं र अघि बढौं, अलि अगाडीको घुम्तीपछिको यात्रा उज्यालो छ, सून्दर छ ।
हांस्दै खल्दै नाच्दै गाउंदै अलि अलि रुदैं क्रान्तिमा शरिक होऔं
यो लेखन तयार हुनमा धरैको योगदान रहेको छ । प्रशतुत गर्ने मात्र स्वनाम हो।
आजको ट्रेड यूनियन कता ?